ᐈ vatambi vangani varimo genshin impact ❤️ GOTAUKA.COM
Last updated Jul 16, 2021 693 0
Izvo zvakati omei kuwana iyo chaiyo nhamba ye vatambi ve genshin impact asi ini ndiri kuenda kukuudza iwe ingangoita huwandu kubva mukugadziri MiHoYo asati apa nhamba dzeiyi.
Pane vatambi vangani varipo
Mutambo uyu wakatangwa munaGunyana 2020 uye kubva ipapo wakawana mukurumbira mukuwedzera kune iwo nekufamba kwenguva vagadziri vakawedzera zvimwe zvinhu zvitsva uye zvirimo kumutambo.
Vanenge mamirioni makumi maviri nematatu vatambi vaive vakasaina mutambo usati watanga, uye mamirioni gumi nematanhatu vakapinda muvhiki yekutanga yekuburitswa. Kunyangwe vaive 21,3 mamirioni muvhiki ino yekutanga ye16.
Asi muna 2021 hauchakwanise kana kupa huwandu hwadzo mu genshin impact kubvira gore rino rine vatambi vakawandisa uye zvakare vanogadzira mutambo wevhidhiyo vanowedzera zvitsva izvo zvinoita kuti vashandisi vakawanda vasvike.
Izvo zvakare zvinodiwa kuti uone mune inotevera inovandudza kuti vazhinji vatori vechikamu vanosvika vanozodanana nevose vatambi, matambudziko, nezvimwe.
Chii chiri chechokwadi ndechekuti kune mamirioni mazhinji evatambi vari kutamba genshin impact zuva nezuva kungave pane nhare mbozha, Tamba 4 kana PC.